Maleeshiyada Al-Shabaab oo u hanjabtay odayaasha dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaleeshiyada Al-Shabaab oo u hanjabtay odayaasha dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka Soomaaliya
September 21, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Afhayeenka kooxda hubaysan ee Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage oo loo yaqaan “Cali Dheere” .
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa uga digtay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed in ay ka qaybgalaan doorashooyinka Soo socda, sida uu sheegay afhayeenka Al-Shabaab.
Sida uu ku sheegay fariin cod ah oo lagu soo daabacay warbaahinta ku hadasha afka kooxda shalay oo Talaado ahayd, afhayeenka kooxda hubaysan ee Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage oo loo yaqaan “Cali Dheere” ayaa sheegay in ay gacan bir ah ku qaban doonaan odayaasha dhaqanka haddii ay ka qayb qaataan hanaanka doorashooyinka dalka ka dhacaya.
135 oday ayaa bisha soo socota soo xuli doona 275 xubnood oo ah baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo u codayn doona madaxweynaha cusub ee dalka.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa laga saaray caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, balse wali waxa ay ka wadaa magaalada weeraro ku dhufoo ka dhaqaaq ah iyo qaraxyo isbiimayn ah, maleeshiyada ayaa u dagaalamaysa sidii ay awooda uga tuuri lahaayeen dowlada uu caalamka taageersanyahay ee Soomaaliya.